Ukuphindaphindwa kwe-GIS iphumelele iBhaso leNkokeli yeGeospatial kwiGeoTec-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-GIS ebonakalayo iwina i-Geospatial Leadership Award kwiGeTec
I-GIS ebonakalayo iwina i-Geospatial Leadership Award kwiGeTec
Umcimbi GeoTec Ibibanjwa minyaka le ukusukela ngo-1987 ukuze kukhuthazwe awona mava mahle kuphuhliso nasekuphunyezweni kwetekhnoloji ye-geospatial. Njengoko ndikubonisile kwifayile ye- Juni ajenda, yabanjwa e-Ottawa esuka kwi-2 eya kwi-5, namhlanje namhlanje abaphumeleleyo bebhaso kwiimigudu efanelekileyo baye bhengezwa.
I-mechanics yale mabhaso ifana neleyo eye yabanjwa kwiminyaka yamuva, yamkelwa kwada kwinyanga ka-Apreli, ngoko ikhona indawo yombono, ivote kwaye igxeka iziphakamiso phakathi kwabathengi bemagazini ye GeoWorld, iendaba GeoReport kunye nabasebenzisi benkqubo GeoPlace.com.
Yaye ngaba abaphumeleleyo:
I-Award Geospatial Innovator - enikezelwa kubaphuhlisi abaye badala isofthiwe entsha okanye i-hardware abanamandla okukhulisa amandla kwi-geospatial industry.
Umninimzi: System Manifold
Ubunono obukhulu kukuba ukutshaya i-meterese ukuphuhlisa izicelo zayo ukwenzela ukuba iifomu ezintsha zokucwangciswa kwee-64 bits zingasebenzisa ngokugcwele ukusebenza kweenkqubo ezifanayo, enye yeyona migaqo-siseko yento esiyaziyo ngoku "njenge-multicore". Kuyathakazelisa ukuba i-Manifold iyakwazi ukuba isixhobo sinekhadi le-teknoloji yesicatshulwa NVIDIA-CUDA kunye nesizukulwana somhlaba owenziwe ngokubanzi kwandiswa, ukusuka kwimephu ene-DTM yamanqaku aphezulu okuxinisa amaninzi angathathwa kwimizuzu engaphezulu kwe-6 ukuya kumasekhondi angu-11 !!!
Kwakukho neendlela ezintathu ezihloniphekileyo ezibhekiselele kuzo:
AutoDesk, kunye nobuchwepheshe bayo bokufikelela Idatha ye-FDO
ESRI Canada, kunye nesiphakamiso sayo se-PurVIEW
LizardTech, kunye Express Suite
Igalelo kwiNkampani kaRhulumente - Inikelwa kwiziko likarhulumente okanye kwisiko ngenjongo yokungenzi inzuzo
Umninimzi: I-American Military Engineering Agency kunye nezoThutho ... (SDDCTEA) ngokumkelwa kwe-IRRIS kwinkqubo yokwenza izigqibo ezinzima.
Kwakhona kule nkalo kukho iintetho ezintathu ezihloniphekileyo:
Isixeko saseNanaimo, e-British Columbia
Icandelo loKhuseleko kunye neNkcitho yeCanada
Isixeko saseQuinte West, e-Ontario.
Umvuzo weNkampani yabucala - Oku kunikezelwa kumaziko abucala athe ahambelana nokwamkelwa kunye nokutsha kwee-technologies ze-GIS.
Umninimzi: ESRI, kunye I-ArcGIS Explorer
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndiyakhumbula ukwenza ukuhlaziywa kwesi sixhobo, esiyiyo yonke imihla ifana neGoogle Earth.
Ezi zibini ezikhankanywe kulolu hlobo zi:
EmerGeo, kunye ne-software ye-EmerGeoGIS Mapping
Intermap Technologies, nge-NEXTmap 3D program
Siyakuvuyela ukwazi ukuba i-Manifold ifezekisa lolu hlobo lokungena kwiimeko ze geospatial, njengoko sibonile CalGIS... kuba emva komnyaka wokuthetha malunga neenzuzo zale sicelo abaninzi bakholelwa ukuba ihlabathi lingenakulungile ukuba lihluleka ukuzibeka phakathi kwezona zikhulu, ukuzigcina njengeteknoloji ezizimeleyo kwaye zingathengi ngenye imboni ye-mega.
AutoDesk ESRI Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Ithuba lomsebenzi eMadrid
Tshela i-AutoCAD yakho yamava uze ufumane ikhamera yevidiyo
CartoDB, okungcono ukudala iimephu online
Inkqubo yeArcGIS ePhambili
Funda ukusebenzisa amanqaku aphambili eArcGIS Pro - isoftware ye-GIS ethatha indawo yeArcMap Funda inqanaba eliphezulu ...